कसरी व्यवसाय कार्डहरू बनाउने: चरण गाईड स्टेप गाईड - Print Peppermint
डिसेम्बर 16, 2019 | विज्ञापन, व्यापार कार्ड आधारभूत, मुद्रण
चाहे तपाई भर्खरै एउटा पेशेवरको रूपमा सुरू गर्दै हुनुहुन्छ वा केही समयको लागि खेलमा रहनुभएको छ, नयाँ व्यापार कार्डहरूले तपाइँको खेल बढाउन सक्दछ।
राम्रोसँग डिजाइन गरिएको कार्डले तपाईं को हो, के गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सन्देश पठाउनुपर्दछ, र तपाईंको शैली वा व्यक्तित्वको अनुभूति दिनुपर्दछ।
जब तपाइँ कसैलाई सुम्पनुहुन्छ, यसले तपाइँलाई सम्पर्क गर्न आमन्त्रित गर्नुपर्दछ, तिनीहरूलाई पृष्ठभूमिमा इन्द्रेणीका लागि कहाँ विचार आयो भनेर सोच्नुहोस्, वा वर्डआर्ट '90 ० को दशकबाट किन फर्कियो भनेर सोच्नुहोस्।
खराब डिजाइन गरिएको कार्डले तपाईंलाई अव्यावसायिक र अयोग्य देखिन सक्छ। यस लेखमा, हामी केहि सुझावहरू साझा गर्ने छौं कसरी राम्रो व्यवसाय कार्ड बनाउने भनेर तिनीहरूलाई थप फिर्ता आउँनेछ!
कसरी तपाइँ तपाइँको कार्ड बनाउन चाहानुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस्
आजकल, त्यहाँ यति धेरै विकल्पहरू छन् जब यो मुद्रण व्यवसायको कुरा आउँछ, प्याम्फलेटहरू, ब्यानरहरू, लेटरहेड्स, र वास्तवमै जे पनि कागजको सामान तपाईंको सानो हृदयको इच्छा छ। यी विकल्पहरू मध्ये केही बिच्छेद गरौं:
अनलाइन डिजाइन र मुद्रण कम्पनी - यो सायद सबै भन्दा सजिलो विकल्प हो। यदि तपाईंलाई फोन स्ट्यान्ड वा चीज चीजको रूपमा डबल कार्डहरू आवश्यक पर्दैन, र तपाईंले अझ जेनेरिक (तर व्यावसायिक) हेर्नु भएन, भिस्टाप्रिन्ट, बिडोलुबास्की, र स्टेपल्स जस्ता कम्पनीहरूले उचित मूल्यको लागि राम्रो काम गर्छन्।
स्थानीय ग्राफिक डिजाइनर / प्रिन्टर - यदि तिमी हो त्यो अद्वितीय, चीज-ग्रेटर व्यवसाय कार्ड खोज्दै, तिनीहरू तपाईंलाई त्यसका लागि मद्दत गर्न सक्षम हुनेछन्। यी कार्डहरू अलि बढि मूल्यवान हुन सक्छ, तर कमसेकम जब तपाईंको सम्भावित ग्राहकलाई केही ताजा-grated parmesan को लागी आग्रह छ, तिनीहरूले तपाईंलाई सम्झना गर्नेछन्!
तिनीहरूलाई आफैं बनाउनुहोस्! - यदि तपाईं आफ्नो Microsoft प्रकाशन क्षमताहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ र राम्रो गुणको प्रिन्टर छ भने, यसको लागि जानुहोस्! उच्च गुणवत्ता कार्डस्टक वा "व्यवसाय कार्ड कागज" प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्। हामीलाई दोष नदिनुहोस् यदि तिनीहरू एकान्तमा बाहिर आयो भने। तर यदि तिनीहरू राम्रो बाहिर जान्छ भने, हामीलाई यी सबै मद्दतकारी सुझावहरूका लागि क्रेडिट दिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्!
यी तीन विकल्पहरू मध्ये कुनै पनि राम्रोसँग फेर्न सकिन्छ। तपाईंले आफ्नो अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ, मूल्यहरू तुलना गर्नुपर्नेछ, र आफुले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको आधारमा के सही छनौट गर्नुपर्नेछ र गुणस्तरको स्तर जुन तपाईं चाहनुहुन्छ।
प्रासंगिक जानकारी मात्र समावेश गर्नुहोस्
कृपया तपाइँको व्यवसाय कार्डमा तपाइँको सम्पूर्ण पुनःसुरु समावेश नगर्नुहोस्। तपाइँलाई सम्पर्क गर्न पर्याप्त जानकारी समावेश गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ समावेश गर्नुहुन्छ:
तिम्रो पुरा नाम
यो तपाईंको व्यवसायको नाम, यदि तपाईंसँग एक छ भने
पेशा वा पेशेवर शीर्षक
भौतिक ठेगाना, यदि लागू हुन्छ
वेबसाइट समावेश गर्नुहोस्, यदि तपाईंसँग एउटा छ भने। तर यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसायको मालिक हुनुहुन्छ वा एउटा सुरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, कार्यक्रमको साथ जानुहोस्! सबैजना र उनीहरूको आमाको आजकल वेबसाइट छ, वा कम्तिमा समर्पित इन्स्टाग्राम खाता।
तपाईंको व्यवसायसँग सम्बन्धित सोशल मिडिया ह्यान्डलहरू वैकल्पिक जानकारी हुन्थ्यो, तर फेरि, सबैजना र उनीहरूको आमासँग अहिले इन्स्टाग्राम छ। वा, तपाईं ट्विटरको साथ जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईं अधिक गम्भीर, व्यवसाय सूट प्रकार हुनुहुन्छ।
ग्राफिक्स को बारे मा? ती जानकारी सहित पनि भरिएका छन्! प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर कागजको सानो टुक्रामा गणना गर्दछ। त्यसकारण र theहरू र छविहरूका बारे जानबुझ्दो हुनुहोस् जुन तपाईं प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ।
QR कोड ठीक ग्राफिक होईन, तर स्मार्टफोनका साथ व्यक्तिहरूका लागि धेरै उपयोगी छ (प्रत्येक व्यक्ति) आफ्नो सम्पर्क सूचीमा तत्काल तपाईंको जानकारी समक्रमण गर्न।
हेडशट, मुख्य रूपमा यदि तपाईं बिक्री वा अन्य उद्योगमा काम गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको ब्रान्ड तपाईंको व्यवसायको पर्यायवाची छ।
लोगो, यदि तपाईंसँग पहिले नै छैन भने, यो सोच्न र डिजाईन गर्न लायक छ (वा एक डिजाइन गरेको) जुन राम्रो अनलाइन र कागजमा देखिन्छ। स्थिरता यहाँ कुञ्जी छ।
जब सम्म तपाईं ग्राफिक डिजाइनर वा एक धेरै प्रतिभाशाली शौकिया कलाकार हो, हामी सिफारिश गर्दैनौं कि तपाईं आफ्नो ग्राफिक्स डिजाइन गर्नुहोस्। तपाईंको व्यवसाय कार्डहरू तपाईंको कम्पनीको अनुहार हो। तपाईं तिनीहरूलाई कार्टुन नेटवर्कबाट केहि जस्तो देखिन चाहनुहुन्न जबसम्म तपाईं तिनीहरूको लागि काम गर्नुहुन्न। त्यसोभए यो ठीक छ।
पीटर पाइपरले निकै राम्रो पेपर निकाले!
भन्नुहोस् कि दस पटक छिटो! त्यसोभए कागजको प्रकार (वा अन्य सामग्री) तपाइँ प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँको कार्डको आकार, र समाप्त प्रकारको बारे सोच्नुहोस् जुन तपाइँ तपाइँको कार्डहरू बन्द गर्न चाहानुहुन्छ।
कार्ड कागज / सामग्री
यदि तपाइँ मानक व्यापार कार्डहरू चाहानुहुन्छ, कुनै पनीर graters छैन, क्लासिक कार्डस्टक ठीक काम गर्दछ। यो आधारभूत हो, र कुनै हास्यास्पद व्यापार वा बाँदर व्यापार छैन, केवल नियमित व्यापार। तिमीलाई थाहा छ म के भन्न खोज्दै छु।
कार्डस्टकको साथ पनि, हामीसँग केही विकल्पहरू छन्:
अल्ट्रा बाक्लो: नामले सlies्केत गरे जस्तै, यो वास्तवमा अन्य कार्डस्टकहरूको तुलनामा अधिक पर्याप्त छ।
हस्ताक्षर: एक मध्यम मूल्य ट्यागको साथ मध्यम वजन।
मानक: यो, राम्रो, मानक, साधारण, अद्वितीय होइन। मानक ठीक छ यदि तपाईले आफ्नो व्यवसायको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने। हामी राम्रो पहिलो छाप बनाउनको लागि केहि थप पैसा लगानी गर्न सिफारिस गर्दछौं। तर यो तपाईंको कल हो।
यदि तपाइँ रूखहरूलाई मार्नु हुन्न भने आफ्नो ब्रान्डि get बाहिर प्राप्त गर्न, तपाईं केहि बढी गैर-परम्परागत ईको-मैत्री विकल्पहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
वैकल्पिक स्रोतबाट बनेको कागज; धेरै प्रिन्टरहरूले गैर-पारम्परिक कागजमा छाप्न प्रस्ताव गर्दछ जुन रिसाइकल गरिएको टी-शर्ट कपासदेखि बाँस सम्मका सामग्रीबाट बनेको हुन्छ। कार्यालय आपूर्ति स्टोरहरू बढ्दै छन्, र यी विकल्पहरू सहित साथै तपाईं DIY मार्गमा जाँदै हुनुहुन्छ भने।
गएको बर्षबाट पुन: पुन: परीक्षण कागज, कार्डबोर्ड, क्रिसमस कार्डहरू, बढ्दो संख्यामा प्रिन्टरहरू समायोजित गर्न इच्छुक छन्
यदि तपाईं कागजको साथ जान छनौट गर्नुभयो भने, तपाईंले चकचकीट वा म्याट फिनिश बीचमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। तस्विर र उज्यालो रंगहरू समावेश भएको कार्डको लागि चमकदार हुन्छ। म्याट अधिक क्लासिक, पाठले भरिएको लुकको लागि सिफारिस गरिएको छ।
आकार र आकारहरू
तपाईं जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड साइज (½ x ”x २”) र आयताकार आकारको साथ जान सक्नुहुन्छ जुन कामको छ किनकि यो वालेट कार्ड स्लटहरू र व्यवसाय-कार्ड धारकहरूमा फिट हुन्छ जुन यो मानक आकार र दिमागमा आकारको साथ बनाइएको छ।
वा, तपाइँ तपाइँको कौशलता प्रदर्शन गर्न चाहने रचनात्मक प्रकार हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा, तपाइँको सोच टोपी राख्नुहोस् र एक सानो अनुसंधान गर्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो गैर पारंपरिक व्यापार कार्डहरू जुन तपाइँको कामसँग प्रासंगिक हुन्छ।
उदाहरण को लागी, टेक्नोलोजी मा काम गर्ने कसैले एक डिजाइन छनौट गर्न सक्दछ जुन USB ड्राइवको रूपमा डबल गर्दछ। हरियो उर्जा उद्योगको लागि, एक बीज प्याकेटले एउटा कार्ड डिजाइन गर्न सक्दछ जुन बीज प्याकेटको रूपमा डबल हुन्छ, वा मोटरसाइकल पसल वा अन्य मेकानिकको पसलले साना पकेट उपकरणमा उनीहरूको कार्डहरू प्रिन्ट गर्न सक्दछ।
सूची चालू र सक्रिय हुन्छ।
रमाइलो भाग: तपाईंको कार्ड डिजाइन गर्ने समय
तपाईं यी विभिन्न तरीकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो आंशिक रूपमा निर्भर गर्दछ जहाँ तपाईं आफ्नो व्यापार कार्ड बनाउने छनौट गर्नुहुन्छ।
एउटा टेम्पलेट छान्नुहोस्। प्रिमेड टेम्प्लेटहरू एक विकल्प हो जुन तपाईं फाईदा लिन सक्नुहुनेछ, तपाईं एक अनलाइन प्रिन्टर, स्थानीय व्यापार, वा माइक्रोसफ्ट प्रकाशक मार्फत बनाइएको कार्ड छनौट गर्नुहोला।
तपाईंको कलात्मक पक्ष प्रदर्शन र यसलाई आफैं डिजाईन गर्न दिनुहोस्।
यसलाई अनुकूलित गर्नुहोस्। एक पेशेवर डिजाइनर अलि बढी महँगो हुन सक्छ, तर यदि तपाइँको ब्रान्ड तपाइँको लागि महत्वपूर्ण छ, यो अतिरिक्त आटा लायक हुन सक्छ। तपाईं अपवर्क र फाइभरर जस्ता वेबसाइटहरू मार्फत स्वतन्त्र डिजाइनरहरू सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ।
फन्ट आकार र प्रकार
तपाईं एक फन्ट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन सुवाच्य र सुन्दर छैन। त्यो क्रोध इटालिक ITC वा ब्ल्याकडेर ITC सिद्धान्तमा राम्रो देखिन्छ, तर यदि हेकले के भन्छ भनेर कसैलाई थाहा छैन भने, तपाईले कार्डहरू पनि प्रिन्ट गर्नुहुन्न।
फन्टको साथ प्रकार पढ्न सकिने, द आकार साथै हुनु पर्छ। एक पेशेवरले तपाईलाई छनौट गरिएको फन्टको लागि कुन आकार उत्तम हो निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ, तर औसत व्यक्तिले म्याग्निफाइ glass गिलास तोडे बिना यसलाई पढ्न सक्दछ, यो राम्रो हुनुपर्दछ।
दुई पटक जाँच गर्नुहोस्, एक पटक प्रिन्ट गर्नुहोस्
तपाईले निर्णय गर्नु भयो कि कसरी र कहाँ तपाईंको व्यवसाय कार्डहरू बनाइने छ। तपाईंले होशियारीपूर्वक सामग्री चयन गर्नुभयो, उत्तम कागज (वा रिसाइकल गरिएको टी-शर्ट सामग्री) छान्नुभयो, र तपाईंको पेशाको साथ जेलमा पर्याप्त आकार / आकार / प्रकार्य। अब, यो प्रिन्टि press प्रेसमा छ, वा अत्याधुनिक इंकजेटमा। मेरो मतलब, हामी २१ औं शताब्दीमा बाँचिरहेका छौं।
उत्तम ब्यापार कार्डहरू प्रिन्ट गर्ने बारेमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो निश्चित गर्नु हो कि उनीहरू त्रुटि रहित छन्। त्यसोभए, तपाईले आफ्नो सबै जानकारी र लोगो थप्दै हुनुहुन्छ, जाँच गर्नुहोस् र डबल-जाँच गर्नुहोस् कि उनीहरू निश्चित रूपमा तपाईलाई चाहानुभएको तरीकामा बाहिर जान्छन्।
यी पाँच चरणहरूको साथ, तपाईं आफ्नो व्यापार कार्ड बनाउन सुरु गर्न राम्रोसँग सुसज्जित हुनुपर्छ।
Women महिलाका लागि व्यवसाय कार्ड धारकहरू, हाम्रो F फ्याभहरू!
भित्तामा उडान बन्नुहोस् - फोनमा एक ग्राहकलाई मद्दत गर्ने हाम्रो आश्चर्यजनक ग्राहक समर्थन टोली सदस्यहरूमा सुन्नुहोस्! →